Ma jiri karaa da 'yar oo baraf ah? | Saadaasha Shabakadda
Ma jiri karaa da 'yar oo baraf ah?
Taasi waa su’aal jawaabtoodu aad ugu caddahay koox cilmi baarayaal Ingiriis ah. Daraasad lagu daabacay joornaalka »Astronomy & Geophysics» saadaalin kara da'da yar ee 'Ice Age' ee qiyaastii 2030.
Shaki la'aan, haddii ay dhacdo, waxay u noqon lahayd nooc badbaado aadanaha iyo sidoo kale noocyada kale ee nolosha ee halkan ka jira, meeraha sii kordhaya ee la garaacayo.
2021-ka heer kulka ayaa hoos u dhici kara, marka loo eego qaabka xisaabeed ee dhaqdhaqaaqa magnetic qoraxda ee ay u adeegsadeen waxbarashada. Seynisyahannadu waxay saadaaliyeen hoos u dhaca mowjadaha magnetic-ka ee saddex wareeg oo qorraxda ah. Hoos udhacani wuxuu u dhigmaa xilliyada cimiladeed ee qabow, waxaana loo yaqaan "Maunder Minimum", oo ah xilli qorraxdu ficil ahaan aan lahayn dhibco.
Valentiza Zharkova, oo ah borofisar ka tirsan Jaamacadda Northumbria, UK, ayaa saadaalisay 'Da' yar oo Yar oo cusub '2030', taas oo sidoo kale waxay socon doontaa 30 sano iyada oo ay sabab u tahay waxqabadka hooseeya ee magnetka ee boqorka xiddigga.
Maunder ugu yar
Ma noqon laheyd markii ugu horeysay ee wax sidan oo kale ah ay dhacaan. Waqooyiga Ameerika iyo Yurub waxaa soo maray qabow daran iyo jiilaal daran. Markii ugu dambeysay waxay ahayd qarnigii 50aad waxayna socotey 60 ilaa XNUMX sano. Markaa, Wabiga London ee Thames ayaa barafoobay, Markay caadiyan barafowayn. Si kastaba ha noqotee, waan noqon karnaa wax wanaagsan.
Hadday saadaashu run tahay, inbadan oo naga mid ah dhib ayey la kulmi doontaa, gaar ahaan haddii aad u qabow nahay; laakiin shaki la'aan waxay u noqon doontaa neef hawo nadiif ah, oo aan waligeed si fiican loo odhan, Dhulka. Iyada oo heerkulka iyo heerarka wasakheynta ay sii kordhayaan, Da'da 'Ice Age' waxay noqon kartaa waxa meeraha u baahan yahay si uu dib ugu helo isku dheelitirka uu sida aadka ah ugu baahan yahay (runti, waxaan u baahanahay) si wax walba ay ugu socdaan sidii loogu talagalay
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Ma jiri karaa da 'yar oo baraf ah?